Guusha xisbiga dimuqraaddiga oo dhabar jab ku noqotay Donald Trump - BBC News Somali
7 Nofembar 2018
Image caption Ilhaan Cumar oo hadlaysa ka dib guushii ay ka gaartay tartanka aqalka Koongareeska
Image caption Alexandria Ocasio-Cortez (dhexda) waa gabadha ugu da'da yar ee Koongareeska gashay
Hogaamiyaha aqalka ee xisbiga Dimuqraaddiga Nancy Pelosi, oo lagu wado iney noqoto afhayeen, xilkaasna heysay tan iyo sannadkii 2007-dii, ayaa iyadoo taageerayaasha kula damaashaadeysa magaalada Washington waxay tiri "Waad mahadsantihiin, wuxuu waa cusub u baryayaa Mareykanka".
Xisbiga Dimuqraaddiga ayaa ka faa'iideystay hadallada qallafsan ee uu Trump uga soo horjeeday dadka soo galootiga ah, waxayna guul ka gaareen doorashadii ugu horreysay ee ka dhacday guud ahaan dalka wixii ka dambeeyay marka uu madaxweyne Trump xilka qabtay 2 sano ka hor.
Image caption Nancy Pelosi oo Waxay mar kale hogaamin doontaa aqalka Koongareeska
Labo gabdhood oo ay da'doodu tahay 29 sano, oo lagu kala magacaabo Ocasio-Cortez iyo Abby Finkenauer, kana tirsan Dimuqraaddiga ayaa lagu wadaa iney noqdaan xildhibaannadii ugu da'da yaraa ee abid qeyb ka noqda mudaneyaasha aqalka.
Haddii ay xaqiijiyaan iney aqalkaas la wareegaan waxaa madaxweyne Trump u suurto galaysa inuu aqlabiyad ku hirgaliyo amarradiisa iyo soo xulashadiisa mas'uuliyiinta dhinaca caddaaladda.
Image caption Andrew Gillum waxaa looga guulaystay barasaabnimada Florida.
Image caption Sida loogu kala guulaystay gobollada ilaa iyo duhurnimadii Arbacada wakhtiga Afrikada bari
Natiijooyinku qaar waxay u wanaagsanaayeen Trump, kuwo kalena waxay u ahaayeen nasiib darro, marka la eego natiijada ka soo baxday doorashadii Badhasaabyada gobollada. Taasi waxay adkeyneysaa tartanka doorashada madaxweynaha ee sannadka 2020-ka.